Home » Lahatsoratra farany farany » Safety » Era vaovao amin'ny fiarovana ny fizahan-tany amerikanina latina
Associations News • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Kolombia • Crime • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Ny filohan'ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany Dr. Peter Tarlow dia mpandahateny lehibe tamin'ny Fihaonambem-pirenena momba ny fiarovana sy fiarovana ny polisy sy ny fizahan-tany any Kolombia.
Tamin'ny 14-15 Oktobra, ny Polisin'ny fizahantany nasionalista Kolombiana dia nanomboka ny vanim-potoana vaovao fiarovana ny fizahan-tany miaraka amin'ny azy manokana sy virtoalyCongreso de Seguridad Turística ”(Konferansa momba ny fiarovana sy ny fiarovana ny fizahantany).
Olona roanjato eo ho eo no nanatrika mivantana ny fihaonambe niaraka tamin'ny mpanatrika virtoaly 2,000 avy amin'ny lafivalon'i Amerika Latina.
Ny fihaonambe dia nahitana mpandahateny avy tany Kolombia sy ireo firenena amerikana latina hafa ary koa ny dokotera Peter Tarlow, izay nisolo tena an'i Etazonia.
Kolombia dia efa mpitondra tany amin'ny polisy momba ny fizahan-tany. Eo ambany fitarihan'i Coronel Jhon (tsy tsipelina diso) Harvey Alzate Duque, Colombia dia lasa mpitarika amerikanina latina eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny fizahantany. Io fanamafisana ny fiarovana sy fizahantany fizahan-tany io dia nanova ny endrika ratsy teo amin'ny firenena teo aloha, ary ankehitriny dia mpitarika ny fizahan-tany any Amerika Latina i Kolombia.
Nanokatra ny hetsika ny jeneraly Jorge Luis Vargas, izay mitarika ny polisy any Kolombia. Ireo mpandahateny iraisam-pirenena dia tsy avy tany amin'ny faritra Amerika Latina ihany fa avy any Frantsa sy Espana koa. Ny lohahevitr'ireo mpandahateny dia niainga avy amin'ny fomba nahatonga ny fiarovana ny fizahantany sy ny filaminana momba ny fizahan-tany fizahan-tany lasa ivon'ity vanim-potoanan'ny Povres-19 ity hatramin'ny olan'ny fiarovana amin'ny cyber sy ny fiarovana ny fiainana manokana. Rehefa nanontaniana momba ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny fizahan-tany i Tarlow dia nanamarika fa "folo taona lasa izay, toerana hafa mihitsy i Kolombia" hoy hatrany i Tarlow fa na dia efa am-polony taona lasa aza ireo mpitsidika any Kolombia no natahotra ny hivoaka, indrindra rehefa maizina ny andro, tsy eo intsony izany toe-javatra izany. ny raharaha. Nanamarika i Tarlow fa androany noho ny polisy an'habakabaka an'arivony voatokana sy voaofana manokana, ireo mpitsidika dia afaka mankafy an'i Kolombia amin'ny fahafantarana fa ny hany loza mety atrehin'izy ireo dia ny mety tsy te-hiala izy ireo.
Niara-nidera an'ity fihaonambe ity ireo mpandahateny tamin'ny kaonferansa ary nanamarika ny maha-zava-dehibe ny fanaovana kaonferansa miteny Espaniola manerana an'i Amerika Latina. Ohatra, Juan Fabián Olmos, izay talohan'ny nisotroany andraikitra tamin'ny fitantanana ny fizahantany any Cordoba Arzantina, dia niarahaba ny polisy Kolombia tamin'ny asa nahavariana nataon'izy ireo tamin'ny famoronana tontolo azo antoka sy azo antoka ho an'ireo mpitsidika manerantany. Brigadier Jeneraly Minoru Matsunaga avy amin'ny Repoblika Dominikanina dia niresaka momba ny fomba nahatongavan'i Politur (mariky ny fiarovana sy fiarovana ny fizahan-tany ny polisy sy ny miaramila) ho fiarovana ny fizahantany manerana ny faritra.
Juan Pablo Cubides izay mandrindra ireo tetik'asa fiarovana ny fizahantany manerana an'i Kolombia dia nanamarika fa i Kolombia dia firenena iray izay mahita ny fiarovana ny fizahantany ho anisan'ny fandraisam-bahiny. Nanamarika i Cubides fa ny mpitandro ny filaminana dia tsy mpiasan'ny lalàna fotsiny, fa ny solontenan'ny fireneny, ary noho izany ny polisy misahana ny fizahan-tany dia ampahany lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny firenena. Nisy mpandahateny niavaka hafa nahitana an'i Manuel Flores avy any Mexico. Flores no amerikana latina voalohany nahazo mari-boninahitra malaza amin'ny World Tourism Network Maherifo amin'ny fizahantany loka, ary Oscar Blacido Caballero, ao amin'ny kaomandy atsimo ao Però izay misy ny tanàna fizahan-tany manan-danja ao Cuzco sy Machu Pichu malaza manerantany. Tsy ny olana eo an-toerana ihany no nojeren'ny kaongresy fa ny olana iraisam-pirenena toy ny fiarovana ny cyber. Dr. Juan Antonio Gómez, avy any Espana dia nanolotra fomba fijery vaovao momba ny loza mitatao manerantany amin'ny fanafihana an-tserasera indray ny indostrian'ny fizahan-tany.
Nifarana tamin'ny 15 Oktobra ny kaonferansath miaraka amin'ny fihirana ny hiram-pirenen'i Kolombia sy ny polisy ary ny finiavana hampihatra ny lesona ianarana manerana an'i Amerika Afovoany sy atsimo.
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny World Tourism Network tsindrio eto.
Governemanta UK: 'Henjana' ny haavon'ny fampihorohoroana...
Lehilahy nanandrana nandefa tifitra tamin'ny lamasinina haingam-pandeha Japoney